September 22, 2020 682
अनशनरत डा. गोविन्द केसी’लाई प्र’हरीले जर्व’जस्ती ट्रमा सेन्टरमा लाने क्रममा उहाँमा संक्र’मण भएको दावी गरेको छ ।
प्रह’रीले तान्दै गर्दा केसीले आफूलाई जबर’जस्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्र’हरीले उहाँलाई को’रोना संक्र’मणका कारण लान खोजेको दावी गरेको थियो । तर केसीले आफू चि’कित्सक भएका’ले संक्रम’णबारे जानकार भए’को बताउँनु भएको थियो ।
आफूहरु त्रिभुवन विमानस्थल’मा पर्खि’रहेको भए पनि उहाँलाई प्र’हरीले सीधै ट्रमा सेन्टर लगेको केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताउँनु भयो । प्रहरीले अपहरणको शैलीमा उहाँ’लाई ट्रमा सेन्टर लगेको केसीको आरोप छ ।
केसीले भने आफू त्रिवि शिक्षण अस्पता’लमा अन’शन बस्न चाहेको सुवेदी’को भ’नाइ छ । प्रहरीले उहाँलाई एयर’पोर्टबाटै बल प्रयोग गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको हो । ट्रमा सेन्टर पु-याइएपछि केसीलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सभित्रै गएर तानेको थियो ।
जुम्लामा ८ दिनसम्म अनशन बसे’का केसी नेपा’लगञ्ज हुँदै आजमात्रै काठमाडौं आएका आउँनु भएको हो । जुम्लामा अनसन बस्दा सरकाले आफ्ना मागको बेवा’स्ता गरेको तथा गत वर्ष बल प्रयोग गर्दा हिंसा भएकाले काठमाडौं आउनुपरेको के’सीले बताउँनु भएको छ ।
१९ औं पटकको अन’शनका क्रममा केसीले पुराना सहम’तिको पालना, कर्णालीमा एमबी’बीएसको अध्यय’न लगायतका ६ बुँदे माग राखेर अनशन सुरु गर्नु भएको हो । – न्युज२४ नेपाल
Prevके हुदैछ यो देशमा ? खबरदार, अति नगर ! भन्दै रबिले गरे यस्तो भिडियो पोस्ट (भिडियो सहित)
Nextवीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्..
साउने सोमबारको महत्व यस्तो छ, यसरी गर्नुहोस् भगवान शिवको पूजा